The Lady ကား ၊ သည်အမျိုးသမီး ( မြန်မာစာတမ်းထိုး) | Lumyo Chit
The Lady ကား ၊ သည်အမျိုးသမီး ( မြန်မာစာတမ်းထိုး)
သည်အမျိုးသမီး ( မြန်မာစာတမ်းထိုး) 720p HD
http://s.ytimg.com/yt/swfbin/watch_as3-vflJs-cKN.swf&lt;div&gt;&lt;div&gt;&lt;img src=”//s.ytimg.com/yt/img/pixel-vfl3z5WfW.gif” alt=”Alert icon”&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt;&lt;/div&gt;&lt;div&gt; &lt;span&gt;&lt;/span&gt; &lt;div&gt; You need Adobe Flash Player to watch this video. &lt;br&gt; &lt;a href=”http://get.adobe.com/flashplayer/”&gt;Download it from Adobe.&lt;/a&gt; &lt;/div&gt; &lt;/div&gt;&lt;/div&gt;
Published on Apr 19, 2012 by myanducation
မြန်မာစာတမ်းနဲ့ ကြည့်ရခက်နိုင်သူများ၊ အလုပ်မရှုပ်အောင် တခါတည်း အသေထည့်ပေးထားတဲ့ ဗီဒီယိုပါ၊ စာတမ်းတွေကိုလည်း တော်တော်များများပြန်ထားပါတယ်၊. အခွေကို http://www.amazon.co.uk/The-Lady-Blu-ray-Michelle-Yeoh/dp/B006E04D1C/ref=sr_1… မှာ မှာယူနိုင်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးအပ်ပါတယ်၊ ဒီမှာလိုတော့ မြန်မာလို မပါဘူး ထင်ပါ၏.. Ohmygod.. I cant believe Youtube is coverting it in original 720P. Enjoys Guys
← မြန်မာမူဆလင်သည် ဘင်္ဂါလီ မဟုတ်ပါ (၁)
ပသီလူမျိုးစုသမိုင်းအကြောင်း၊( pathi pdf ) ကို ကလိက်လုပ်၍ဖတ်ပါ။ →